စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးသည်ဒေသဆိုင်ရာ | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, ဧပြီ 18, 2011 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, အောက်တိုဘာလ 16, 2013 Douglas Karr
သငျသညျအကြှနျုပျကိုမှန်ကန်ကြား၏ ... စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးဒေသခံဖြစ်ပါတယ်။ သင်၏စီးပွားရေးသည်အမျိုးသားနှင့်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်ဟုငါငြင်းခုန်သည်မဟုတ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုသည်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းမှရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားခြင်းကိုငါရိုးရှင်းစွာငြင်းခုံမိသည် as ဒေသခံ - ကတကယ်သူတို့ကိုကူညီနိုင်သော်လည်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားလုံး၏ပထဝီအနေအထားနှင့်တည်နေရာများကိုမြှင့်တင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတိုက်တွန်းပါသည်။ ငါတို့တည်ဆောက်ထားသည့်ကြံ့ခိုင်သောမြေပုံအပလီကေးရှင်းများမှတဆင့်ဖြစ်စေ တောရိုင်းငှက်များ Unlimitedသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအားကျွန်ုပ်တို့ပြုသကဲ့သို့သူတို့ site ၏စာမျက်နှာတိုင်းတွင်သူတို့၏ဖုန်းနံပါတ်နှင့်လမ်းလိပ်စာကိုစာရင်းပြုစုရန်အားပေးခြင်း Lifeline ဒေတာစင်တာများ.
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းကိုတစ်နေရာရာမှာလုပ်ကိုင်တယ်။ ကျနော်တို့မြို့လယ်ကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်၊ အဲဒါကမက်ထရိုနည်းနည်းပဲခံစားရတယ်၊ အင်ဒီယာနာပိုလစ်မြို့လယ်မှာတည်ရှိပြီးစီးပွါးရေးကုန်သွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးဗဟိုဌာနနဲ့ကပ်လျက်တည်ရှိတယ်။ အံ့သြစရာကောင်းတာကငါတို့ဖောက်သည်တွေအဲဒီနေရာမှာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ရှိဥရောပ၊ အိန္ဒိယ၊ ကနေဒါနှင့်အနောက်နှင့်အရှေ့ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်လုံးတွင်အလုပ်လုပ်လျက်ရှိသည်။
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏လိပ်စာမြှင့်တင်သလဲ? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းတို့ဘယ်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာလူတွေကိုအသိပေးတာကသူတို့ဆီကယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ကြီးမားတဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်တယ်။ မျက်မြင်မရ ၀ န်ထမ်းများဖြင့်မမြင်ရသောကုမ္ပဏီများတွင်မမြင်ရသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်သူတို့၏ပရိသတ်နှင့်ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုတည်ဆောက်ရန် ပို၍ ခက်ခဲသည်။ သင်ရှာမတွေ့နိုင်သည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်သင်ငွေများစွာအကုန်အကျခံမည်လော။ ငါမလို! ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည်သင်ဒေသတွင်း၌သင်ကိုယ်တိုင်တည်ထောင်ထားကြောင်းသိလိုကြောင်းသက်သေပြနိုင်သည့်သက်သေအထောက်အထားများပင်ရှိသည် - ဖုန်းနံပါတ်များနှင့်လိပ်စာများကိုပေးသောအခါဆိုဒ်များကိုပိုမိုလျှင်မြန်စွာရည်ညွှန်းသည်။
ရေဒီယိုပြခဲ့တယ် ဒေသခံ SEO ဆိုသည်မှာ ယခုအပတ်ကြောင့်စိတ်ကူးသွား၏။ နားထောင်သူတစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းမွန်တဲ့ကိရိယာတစ်ခုပေးခဲ့တယ် စာရင်းရယူပါ။ အခြားဆိုဒ်များတွင်မှတ်ပုံတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်လုပ်စရာများစွာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အကောင်းဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဖြတ်သန်းသွားမည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည် - သို့သော်အခြားသူများနှင့်ကျိန်းသေမှတ်ပုံတင်မည်။ စာရင်းသွင်းပြီးပြီလား
မှတ်ချက် - နောက်စာဖတ်သူတစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြခိုင်းတယ် Universal စီးပွားရေးစာရင်း (Affiliate link)၊ သင်၏စီးပွားရေးကိုတည်နေရာအခြေပြုလမ်းညွှန်တိုင်းတွင်မှတ်ပုံတင်ထားကြောင်းသေချာစေသည့် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခု။ သင်၏စီးပွားရေးကိုဒေသတွင်းတွင်ရှာမတွေ့ပါကနိုင်ငံအဝှမ်းနှင့်နိုင်ငံတကာတွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အခက်အခဲရှိနိုင်သည်။
Tags: Chris baggottအီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစာအုပ်key ကို performance ကိုညွှန်ကိန်းများရုပ်ရှင်တွေပိုက်ဆံအိတ်မန်နေဂျာ'to yahoo
Huffington နှင့်အတူ Huff